ဘလော့မော်ကွန်း - ကြံ့ခိုင်ရေးပြန်အမ်း
ပင်မစာမျက်နှာ » categoryBlog အားဖြင့်မော်ကွန်း
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများကြားတွင်ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအခြေခံနားလည်မှုမှာဤအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါသည်အားနည်းသောကိုယ်ခံအားစနစ်ရှိသူများသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးပြproblemsနာများရှိသူများသေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်မို့လူသန်းပေါင်းများစွာဟာ ...
မတ်လ 25, 2020 admin ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာအသက် ၄၀ ကျော်အမျိုးသားတွေအတွက်ရင်ဘတ်နဲ့လက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ အသက် ၄၀ ကျော်အမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း - အသက် ၄၀ ကျော်ယောက်ျားများအတွက်ရင်ဘတ်နှင့်လက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းသင်ဟာအသက် ၄၀ ကျော်လိုချင်ပါသလား။ Day 40 မှဤလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြည့်ပါ ...
Cov ဟုအတိုချုံးထားသော coronaviruses များသည်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများကိုပါကူးစက်နိုင်သောကျယ်ပြန့်သောဗိုင်းရပ်စ်များဖြစ်သည်။ လူသားများတွင်သူတို့သည်အအေးမိခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအဆုတ်ရောင်ရောဂါအထိ (အဆုတ်ရောဂါကူးစက်ခြင်း) မှအမျိုးမျိုးသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအများစုဟာထိုးနှက်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးကုသမှုခံယူနိုင်ပါတယ်။
မတ်လ 10, 2020 admin ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
ဤဆောင်းပါး၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအသုပ်တစ်သင်းလုံးပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဆွေးနွေးပြီးသင်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်သင်၏အသုပ်များ၌မည်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်ကိုအကြံပေးချက်များကိုမျှဝေပါမည်။ ဤအကြံပြုချက်များသည် Metabolic Cooking စာရေးသူများမှ Dave Ruel & Karine Losier ထံမှဖြစ်သည်။ ဒီမှာပါ...
ဇန်နဝါရီလ 10, 2020 admin ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
ခေါင်းမာသောဝမ်းဗိုက်အဆီ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီအမြောက်အများရှိသည်။ အချို့လူများက၎င်းသည်မျိုးရိုးဗီဇညံ့ဖျင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြားလူများက၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုဟုဆိုကြသည်။ နှင့်အခြားရှေးရှေးအများအပြားကဒီဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကြောင့်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါဆိုအမှန်တရားကဘာလဲ။ အမှန်တရားမှာတော့ ...
မတ်လ 3, 2018 admin ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
လူတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်မည်သို့မည်ပုံအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အပြေးနေသည်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုမှကြွလာသောပထမဦးဆုံးအရာတစျခု။ သင်အားကစားခန်းမမှာလူများ၏အများစုသည်ပြေးစက်ပေါ်တွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအကွောငျးကိုမှားသွားလျှင် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2018 admin ဘ‌‌လော့ခ်, reviews မှတ်ချက်မရှိ
Image ကိုရင်းမြစ်: Pexels.com နေ့တိုင်းလူတွေနေ့တိုင်းအရေပြားအပေါ်အသုံးပြုကြသည်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးထုတ်ကုန်မေ့ဘဲ, အလေထုထဲတွင်အဆိပ်, အစားအစာ, သူတို့မှရေကိုသောက်ထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအဆိပ်ပိုးသတ်ဆေး, ပလပ်စတစ်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အရည်များပါဝင်သည်။ သင်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ပေမယ့် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2018 admin ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောကဏ္aspectsများဖြစ်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်နှင့်တိကျခိုင်မာသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိုင်သကဲ့သို့သင့်ကိုလည်းနာကျင်စေ။ နာကျင်စေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည်လေ့ကျင့်ခန်းကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်၊ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2017 FitnessRebates ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
ချွေးမြှင့်တင်ရန်, ရေနွေးငွေ့အခန်းတစ်ခန်းကိုသုံးပြီး, ဒါမှမဟုတ်ချွေးပေါင်းအိမ်ဒဏ္ဍာရီ #1 အခြေခံကျကျသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆိပ်၏ရှေ့မှောက်တွင်လျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။ သူ့ဟာသူ detoxifying ၏သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအနည်းလမ်းများတစ်ခုမှာ, ချွေး (ချွေး) ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သာသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်၏ပမာဏ (1% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း) ခြေရာကောက် ...
ဇန်နဝါရီလ 29, 2017 ဆမ် Socorro ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
မိုဟာမက်အလီ (၁၉၄၂ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Classius ရွှံ့စေးဖွားသည်) သည်အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ၁၉၆၀ တွင်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဟဲဗီးဝိတ်လက်ဝှေ့ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်။ နည်းပြ မိုဟာမက်အလီ၏
ဇြန္လ 13, 2016 FitnessRebates ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စတင်စဉ်းစား Beginners များအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေးသိကောင်းစရာများ? ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဦးအားကစားရုံသွား? ဤအ 10 ကြံ့ခိုင်ရေးအကြံပေးချက်များသင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်သုံးပါ။ 1 ။ သင်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးထဲကအများစုကိုရရှိရန်ရည်ရွယ်ပါလျှင်၎င်းသည်သင့်လေ့ကျင့်ခန်း Worth Make ...
မတ်လ 10, 2016 FitnessRebates ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
Proform treadmill မှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
ProForm အမှတ်အသားပြေးစက်ကို ICON Health and Fitness မှထုတ်လုပ်သည်။ ICON Health and Fitness သည် Utah မှအခြေစိုက်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းသုံးစက်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ICON ကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေးသည် NordicTrack, Healthrider နှင့် Freemotion အပါအ ၀ င်အပိုလိုက်စက်များကိုထပ်မံပိုင်ဆိုင်သည်။ သင် treadmill ယူနစ်မှ ... သင်သတိပြုမိလိမ့်မယ်
ဇန်နဝါရီလ 18, 2016 FitnessRebates ဘ‌‌လော့ခ်, Proform, treadmill မှတ်ချက်မရှိ
အမြန်ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) အံ့သြဖွယ်ရာများပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုသင့်အားပြောသူမည်သူမဆိုသည်အားမလပ်ဘဲစူပါပါးပါးပါးပါးကိုရစေလိမ့်မည်။ ဒါကိုကြားခဲ့လား သူတို့သည်သင့်ကိုလိမ်နေကြသည်။ အမှန်တရားမှာလျင်မြန်စွာပြုပြင်ခြင်း (သို့) အံ့ဖွယ်အမှုလုံးဝမရှိတော့ပါ။
ဇြန္လ 18, 2015 FitnessRebates ဘ‌‌လော့ခ် မှတ်ချက်မရှိ
1 ၏ 212နောက်တစ်ခု»